मकवानपुर/ गत २०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ अत्याधिक मत ल्याएर सांसद बनेका थिए । सांसदमा विजयी भएसँगै बानियाँ नेपाल सरकारको संस्कृती पर्यटन एवम् नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री हुुँदै गृह राज्यमन्त्री पनि...
मकवानपुर/ देशमा झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिएका छन् । २० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् मकवानपुरले पनि १० वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाएको छ । मकवानपुरको ८ वटा गाउँपालिका, १ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिकाको हरेक वडा–वडाका जनताले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन् ।स्थानीय...
भोट हाल्ने दिन कहिले आउला भन्दाभन्दै आइसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको दुई दशकपछिको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै छन् । अब गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मिठो वाक्य सुनाउँदै दलका नेता नागरिकको घरघरमा पुगीरहेका छन् । कोहीले सिंहदबारको काम गाउँमा उपहार ल्याउछौं भन्दै हिडेका छन्, कोही अब मुलुकमा समृद्घि चाहने हो भने हामीमात्रै असल...
अचेल हाँस्नका लागि धेरै सजिलो छ । पहिले पहिले हाँस्नका लागि कि चुट्किला पढ्नुपथ्र्यो कि टिभीमा हाँस्य कार्यक्रम नै हेर्नुपर्थ्यो । अचेल हाँस्नका लागि न त चुटकिलाका किताब खोज्न पसलमा चहार्नुपर्छ न त टेलिभिजनमा त्यस्ता हाँस्य सम्बन्धि कार्यक्रम कुरेर नै बस्नुपर्छ । अचेल हाँस्नका लागि केवल गफ सुनेपुग्छ । गफ कसको सुन्ने ? सबैलाई उत्तर सहजै...
उ यतिबेला राप्रपाको असली कार्यकर्ता भएको छ । सुरुमा काङ्ग्रेस, अनि एमाले, माओवादी जनयुद्धका बेलामा माओवादी, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका काङ्ग्रेसलाई भोट हालौं भन्दै हिडेको उ अहिले त राप्रपाको असली कार्यकर्ता बनेर नमस्कार गर्दै हिड्न थालेको पो देखियो । समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले मात्र जानेका हुन् कि अरुले...
चुनाव : अवसरै अवसरको पर्व !
अहिले देश चुनावी माहौलमा होमिएको छ । स्थानीय निर्वाचन नभएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । यत्तिका वर्षपछि चुनाव हुने भएपछि नेता मख्ख, कार्यकर्ता दङ्ग नहुने कुरै भएन । लुकेका नेता टोलटोलमा पुग्न थाले, कार्यकर्ता पनि आफ्ना नेता आए भनेर मख्ख पर्न थाले अनि त बनिहाल्यो नि चुनावी माहौल । चुकनाव हो चुनावमा जे पनि हुन्छ । हार्नुपर्नेले जित्नसक्छ,...